1.5m Melt Blown Cloth Machine, Kk Spunbond Nonwoven Machine - Meiben
I-Hebei Meiben Technology Co., Ltd.itholakala eXiong'an New District enkabeni yezwe laseBeijing-Tianjin-Hebei enendawo enhle nokuhamba okulula. Inkampani yethu ine-elite yobungcweti, esezingeni eliphakeme, nekhwalithi esezingeni eliphakeme, ukuthuthuka okuqhubekayo, kanye namaphayona wokuqamba umkhiqizo. , Futhi ukuthengisa okuqinile kanye nethimba lesevisi yokuthengisa ngemuva kokuphishekela okulandela amakhasimende kuqala.
Isipiliyoni seminyaka eyi-10
Kuthunyelwa emazweni angaphezu kwekhulu
Umugqa ukukhiqizwa Nonwoven
Umugqa wokukhiqiza we-Spunbond nonwoven
Intengo Engcono kakhulu ye-SMS Surgica ...
Umshini Wezindwangu Ohamba phambili we-SMS we-Best Price Gown SMS Nonwoven Indwangu Umshini Osezingeni Eliphakeme Wokukhiqizwa Kwendwangu ye-Spunbond Nonwoven Lin Izici zezindwangu zezokwelapha nezempilo 1. I-lightweight: I-polypropylene resin isetshenziswa njengezinto zokukhiqiza eziphambili, ngamandla adonsela phansi we-0.9 kuphela, kuyizingxenye ezintathu kwezinhlanu kuphela zikakotini. Iyabhibha futhi izwa kamnandi; 2. Ubumnene: Yenziwe ngemicu emihle (i-2-3D) futhi yakhiwa yi-light-point hot-melt bonding. Umkhiqizo oqediwe ulingene ngokulingene ...
I-SMS PP incibilikiswe yi-Nonw ...
Inqubo yokukhiqizwa kwezindwangu ezingalukiwe 1. I-fiber enekhadi 2. I-Fiber kuwebhu 3. Ukulungiswa kwenetha le-fiber 4. Yenza ukwelashwa kokushisa 5. Ekugcineni, ukuqeda nokucubungula Embonini yezidingo zansuku zonke, ingasetshenziswa njengendwangu yezingubo izinto zokwakha, amakhethini, okokuhlobisa odongeni, amanabukeni, izikhwama zokuhamba, njll. Emikhiqizweni yezokwelapha neyezempilo, ingasetshenziswa ekukhiqizeni imijiva yokuhlinza, imijiva yesineke, amaski, amabhande enhlanzeko, njll. izindwangu ezingalukiwe Ukukhiqizwa okungalukiwe umugqa womugqa ...
Izici zezindwangu zezokwelapha nezempilo 1. I-Lightweight: I-polypropylene resin isetshenziswa njengezinto ezisetshenziswayo eziyinhloko zokukhiqiza, ezinamandla adonsela phansi angu-0.9 kuphela, okuyizingxenye ezintathu kwezinhlanu kuphela zikakotini. Iyabhibha futhi izwa kamnandi; 2. Ubumnene: Yenziwe ngemicu emihle (i-2-3D) futhi yakhiwa yi-light-point hot-melt bonding. Umkhiqizo oqediwe uthambile ngokulingene futhi unethezekile; 3. Okuxosha amanzi nokuphefumulekayo: Izingcezu zePolypropylene azimunce amanzi, zinomswakama onguziro ...
Spunmelt esiyinhlanganisela non ...
I-Meltblown nonwoven production line Izinzuzo zemishini engalukanga 1. Yonke inqubo yokugeleza kwemishini engalukiwe ingenziwa ngemishini ngokuphelele, futhi kudingeka abantu abangu-1 ~ 2 kuphela ukuthi basebenze, okungagcina abasebenzi abalinganiselwe. 2. Imishini yendwangu engalukiwe ingalungisa ijubane lokukhiqiza nosayizi womkhiqizo ngaphakathi kwebanga. Imishini yendwangu engalukiwe isebenzisa ukusebenza kwesikrini sokuthinta, ifakwe ukunyathela ubude obungaguquki, ukulandela ngomkhondo isithombe, ukubala okuzenzakalelayo nokubhoboza okuzenzakalelayo, njll. 3. Ku ...
Inqubo yokwenziwa kwendwangu engalukanga Imininingwane ye-Line (Prodnct width) 1600mm 2400mm 3200mm Equipment 29x13x10m 30x14x10m 32x15x10m Speed ​​350m / min 350m / min 30m / min Gram Weighht 10-150g / m2 10-150g / m2 10-150g / I-m2 Isivuno (Imikhiqizo ngokuya ngo-20g / M2) 9-10T / Izinsuku 13-14T / Izinsuku 18-19T / Izinsuku ITEM EFFECTIVE WIDTH GSM ANNUAL OUTPUT EMBOSSING PATTERN S 1600MM 8-200 1500T Diamond, oval, cross and line S 2400MM 8- 200 2400T Diamond, okusaqanda, isiphambano futhi umugqa S 3200MM ...